အစားသောက်ဆို အရှေ့ဆုံးကကြိတ်မယ့် Baeလေးတွေအတွက် စင်ကာပူက ‘Boba Tea Toast’ – Trend.com.mm
Posted on April 18, 2018 April 18, 2018 by Wint
‘Boba Tea Toast’ က မြင်တာနဲ့ စားချင်စဖွယ်ဟုတ်ရုံတင်မက အရသာကလည်းရှယ်မှရှယ်! စားဖူးသူတိုင်း လက်တို့ပြီးညွန်းနေတဲ့ ‘Boba Tea Toast’ … ဂလု!
အစာပြေမုန့်ချို တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ စင်ကာပူမှာ စတင်နာမည်ကြီးနေတာ ရက်ပိုင်းအတွင်းပဲ ရှိသေးပြီး အင်တာနက်မှာတော့ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေက တမ်းတမ်းစွဲစားချင်နေတဲ့ ‘Boba Tea Toast’ ကတော့ ဆန်းဒွစ် မီးကင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ပေါင်မုန့်ကြားထဲမှာ ပုလဲသီးလေးတွေကိုညှပ်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံ Benjamin Browns မှာ (၅)ဒေါ်လာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Boba tea ကို ချိူမြိန်တဲ့ ဆော့အမျိုးစားပေါင်းစုံ ( Ovaltine ၊ Crunchie နဲ့ Caramel Lotus ) တို့နဲ့ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။
Benjamin Browns က လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကလည်း မစ်ရှိတ်တစ်မျိုးနဲ့ နာမည်ကြီး
ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့တုန်းကလည်း သောက်သုံးသူတွေများပြားခဲ့သလို ယခုချိန်ထိ ဒီစားသုံးသူတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တုန်းပါပဲ။ အခုဆို အစာပြေမုန့်ချို့ တစ်မျိုးနဲ့ပါ စားသုံးသူတွေကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ နောက်ထပ်အသစ်အနေနဲ့ရှိနိုင်တဲ့ အအေးတွေကတော့ milo avocado coffee shake ၊ dirty sakura matcha (သို့) chocolate တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ ‘Boba Tea Toast’ လိုပဲ ထိုင်ဝမ်မှာလည်းရှိတယ်လို့ အစောပိုင်းလောက်က
ကြားဖူးသလိုလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူလိုမျိုးပဲ အရသာကို ဖော်စပ်ထားလားဆိုတာတော့ သေချာမသိရသေးပါဘူး။
စင်ကာပူရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ၊ အမျိုးတွေရှိရင် ဒါလေးသွားစားကြည့်ပါလားလို့ ညွန်းလိုက်ကြပါဦးနော်…
အစားသောကျဆို အရှဆေုံ့းကကွိတျမယျ့ Baeလေးတှအေတှကျ စငျကာပူက ‘Boba Tea Toast’
‘Boba Tea Toast’ က မွငျတာနဲ့ စားခငျြစဖှယျဟုတျရုံတငျမက အရသာကလညျးရှယျမှရှယျ! စားဖူးသူတိုငျး လကျတို့ပွီးညှနျးနတေဲ့ ‘Boba Tea Toast’ … ဂလု!
အစာပွမေုနျ့ခြို တဈမြိုးဖွဈတဲ့ စငျကာပူမှာ စတငျနာမညျကွီးနတော ရကျပိုငျးအတှငျးပဲ ရှိသေးပွီး အငျတာနကျမှာတော့ နိုငျငံအသီးသီးမှာ အငျတာနကျသုံးစှဲသူတှကေ တမျးတမျးစှဲစားခငျြနတေဲ့ ‘Boba Tea Toast’ ကတော့ ဆနျးဒှဈ မီးကငျတဈမြိုးဖွဈပွီး ပေါငျမုနျ့ကွားထဲမှာ ပုလဲသီးလေးတှကေိုညှပျထညျ့ထားတာဖွဈပါတယျ။
စငျကာပူနိုငျငံ Benjamin Browns မှာ (၅)ဒျေါလာနဲ့ ဝယျယူနိုငျပါတယျ။ Boba tea ကို ခြိူမွိနျတဲ့ ဆော့အမြိုးစားပေါငျးစုံ ( Ovaltine ၊ Crunchie နဲ့ Caramel Lotus ) တို့နဲ့ပေါငျးစပျထားပါတယျ။
Benjamin Browns က လှနျခဲ့တဲ့တဈနှဈလောကျကလညျး မဈရှိတျတဈမြိုးနဲ့ နာမညျကွီး
ခဲ့ပါသေးတယျ။ အဲ့တုနျးကလညျး သောကျသုံးသူတှမြေားပွားခဲ့သလို ယခုခြိနျထိ ဒီစားသုံးသူတှကေို ဆကျလကျထိနျးသိမျးထားနိုငျတုနျးပါပဲ။ အခုဆို အစာပွမေုနျ့ခြို့ တဈမြိုးနဲ့ပါ စားသုံးသူတှကေို မိတျဆကျလိုကျပါပွီ။ နောကျထပျအသဈအနနေဲ့ရှိနိုငျတဲ့ အအေးတှကေတော့ milo avocado coffee shake ၊ dirty sakura matcha (သို့) chocolate တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
အလားတူ ‘Boba Tea Toast’ လိုပဲ ထိုငျဝမျမှာလညျးရှိတယျလို့ အစောပိုငျးလောကျက
ကွားဖူးသလိုလိုရှိခဲ့ပါတယျ။ စငျကာပူလိုမြိုးပဲ အရသာကို ဖျောစပျထားလားဆိုတာတော့ သခြောမသိရသေးပါဘူး။
စငျကာပူရောကျနတေဲ့ သူငယျခငျြးတှေ ၊ အမြိုးတှရှေိရငျ ဒါလေးသှားစားကွညျ့ပါလားလို့ ညှနျးလိုကျကွပါဦးနျော…
တစ်ကိုယ်တော်ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေဖို့ ဒီအချက်လေးတွေသိထားဖို့လို